अद्भुत चित्रकार प्रकाश थापा : उनका केही चित्र, केही अनुभूति
प्रायः आर्टिष्टहरू ईष्र्यालू हुन्छन् । अरूको प्रशंसा गर्दैनन्
आईतबार, जेठ १९, २०७६ सारङ्गी न्यूज
बालुवाद्वारा चित्र बनाउने नेपालकै पहिलो चित्रकार : प्रकाश थापा"प्रथा"का चित्रकला
पाेखरा । यदी कसैले चितौनलाई नयाँ शब्दमा परिभाषित गर् भन्यो भने, -- सिर्जनाको नदी भन्नेछु म । जो, नारायनघाटको छेउ भएर बगिरहने नारायणी झैँ गहिरो छ । यो न कहिले थाकेको छ, न कहिले सुकेको छ । बगिरहन्छमात्र । अगर, भेगीय मूल्यांकन गर्नूपरे, देशलाई कला-साहित्यमा चितौनले ठूलो गुन लगाएको छ ।
धिपधिपे कुनै अँध्यारो कोठामा बलिरहेको टुकीजस्तो । कलाकर्ममा लागिरहेकोमान्छे एउटा जो छ यहीँ चितौनमा ध्यानमग्न बुद्धजस्तो । उसलाई देशले चिन्नु र नचिन्नुमा केही गुनासो छैन । बस् ! सिर्जनाकर्ममा लागिरहनूछ । जसरी चराले चुच्चोमा एउटा-एउटा कुनै मसिनो खर बोकेर गुँड बनाएजस्तो । उसले पनि दैनिक सिर्जनाको गुँड बनाउन भुर्र कहिले यता उड्छ, कहिले भुर्र उता उड्छ । र, कहाँकहाँबाट ससाना खरको टुक्रा थूँडको चुच्चोले च्याँप्छ र बनाउँछ मेहनतको गुँड । फुल पार्छ । बचेरा निस्काउँछ-हुर्काउँछ । फेरि गुँड बनाउन उडिरहन्छ, तलतल बगिरहेको नारायणीमाथि पखेटाले पूल बनाएर ।
अँ ,, म अहिले चितौनका चित्रकार प्रकाश थापा"प्रथा" दाइको कुरा गर्दैछु ---
तीसवर्षभन्दा लामो अनुभव संगाल्नुभएका प्रकाश दाइसित यो क्षेत्रमा केही यस्ता अनुभूतिहरू छन् रे बिर्सिनैनसकिने । जस्तो कुनै प्रेमीले बिर्सिनसक्दैन आफ्नो प्रथम प्रेमिकालाई ।
त्यस्तै नबिर्सेको एउटा कुरा दाइकै मुखबाट, - म तीनकक्षा पढ्दादेखि चित्रप्रति रूचि राख्दोर छु भाइ ! कापीको पन्ना सकिएपछि घरका भित्तामा, दलानमा, आँगनछेउको छपनीढुंगामा जतापायो उतै अंगारले चित्र बनाइरहन्थेँ । तर कुनै पन्चेको अनुहारमा मोसो दलेजस्तो घरै विरूप भएपछि बाआमा रिसाउनूरिसाउनूहुन्थ्यो । खुब गाली गर्नुहुन्थ्यो ।
पिट्नू चैँ हुन्थेनँ, सायद कान्छोछोरा भएर माया धेरै लाग्दो हो, कुन्नि ! ( भित्र स्मृतिको तख्तामा धूलैधूलोले पुरिएको धेरै पुरानूकुरा टक्टकाउँदै हाँस्नुहुन्छ दाइ । हाहाहा ) पछि, सातकक्षा पढ्दैगर्दा जुनियर रेडक्रस सर्कलद्वारा आयोजित अन्तर विद्यालय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि भने, दाइलाई चित्रको धङधङी नशा लाग्यो रे !
त्यसपछि दाइको संघर्ष शुरु भएछ --
एसएलसी पास गरेपछि ललितकला क्याम्पस, काठमाडौँमा चित्रकला पढ्न पुगेँ, भाइ ! मैले ७ कक्षा पढ्दादेखिनै रंग-ब्रस चलाउन थालिसकेको थिएँ, स्केच मज्जाले कोर्ने भैसकेको थिएँ । क्याम्पसमा वर्षभरि एउटै काम दोहोर्याइरहँदा, हेरिसकेको कुनै पुरानू फिलिम पुनः हेर्दा वाक्क लागें झैँ मलाई वाक्क पो लाग्यो र, क्याम्पसको पढाईलाई गोली हान्दिएँ अनि प्राइभेट पढ्न पोखरा हान्निएँ ।
पोखरामा आर्ट् सिक्न जाँदाको रमाइलो किस्सा ---
खासमा म पोखरा जानूकोकारण, त्यहाँ केही नाम चलेका स्थापित आर्टिष्टहरू हुनुहुन्थ्यो । म उहाँहरूसित संगत गर्न चाहान्थेँ । दुर्गा बराल सरसँग वाटर कलर सिक्न चाहान्थेँ, उहाँलाई भेटेँपनि । तर बाराम्बार भेट्दापनि उहाँद्वारा मलाई सिकाउने कुनै संकेत पाइनँ मैले । अन्त, निरास भएर भुर्तेल सर कहाँ गएँ ।
यसो कुरो बुझ्दा यी दुई बूढाहरूको शीत युद्ध रहेछ जस्तो लाग्यो ।
कन्नो पछाडि एकार्काले कुरा काटिहाल्ने । शत्रुको मित्र शत्रु नै हुन्छ भने झैँ, भुर्तेल सरले दुर्गासरको कुरा काट्दै केही ज्ञान दिनुभो मलाई । त्यतिले नपुगेर आलोक सरकोमा गएँ-त्यस्तै भयो । पछि बुझ्दै जाँदा म पोखरामा बसोस् भन्ने चाहना रहेनछ, कसैको ।
प्रायः आर्टिष्टहरू ईष्र्यालू हुन्छन् । अरूको प्रशंसा गर्दैनन् --
चित्र सिक्नेक्रममा धेरै थरीका मान्छेहरूलाई भेटेँ । कोही एकदमै मूडी । कोही एकदमै लाक्षी । कोही एकदमै आत्मप्रशंसक । अरूको राम्रो चित्रलाई राम्रो कहिले भन्दै नभन्ने । बरू खोट कहाँ छ भनेर खोजिरहने कुनै जमिनदारको हर्तालू मुन्सीजस्तो । हतोत्साहित गरिरहने । त्यही दिक्क भएर चितौन फर्केँ । फर्केपछि, यहाँको एक साप्ताहिक पत्रिकाको फ्रन्टपेजमा प्रथा नामले कार्टून बनाउन थालेँ । चित्रहरू ग्यालरीमा दिने र विदेशतिर चित्रहरू पठाउन थालेँ । राम्रै थियो तर त्यसताका माओवादीको द्वन्द्वकालमा ब्याबसाय सिथिल भएपछि विदेशतिर लागेँ र दुई वर्षपछि फर्केँ । हो, तिमीले भनें झैँ बालुवाको चित्र नेपालमा बनाउने प्रथम चित्रकार मै हुनुपर्छ । यो प्रयोगात्मक कला हो ।
पुरस्कारको कुरा गर्दा ---
ओहो ! भाइ, त्यो अहोभाग्य पाउनलाई चाकरी र झन्डाको राजनीति गर्नूपर्छ ।
जो मैले गरिनँ । जति पुरस्कार पाएको छु, प्रतियोगितामा जितेर पाएको छु ।
केही पुरस्कारहरू --
* प्रथम - अन्तर विद्यालय चित्रकला पोष्टर प्रतियोगिता । २०४१
* प्रथम -- अन्तर जिल्ला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता । -- २०४८ ।
* प्रथम -- चितवन महोत्सव -- २०६९
आईतबार, जेठ १९, २०७६, १८:०६:००